Ruux ka bad-baaday shilkii diyaaradda Pakistan oo ka warramay sida ay wax u dhaceen - Calanka.com
Mid ka mid ah dadki shilka diyaaradeed ee ka dhacay magaalada Karachi ee dalka Pakistan ka badbaaday oo ka warramay sida uu shilka u dhacay ayaa sheegay inuu arkayey oo keli ah ‘diyaaradda oo uu dab qabsaday’.
Maxamed Zubeyr ayaa ka mid ahaa labadi qof ee ka badbaadday shilkaasi diyaaradeed ee diyaaradda ay lahayd shirkagga PIA ee dalka Pakistan oo nooceedu ahaa Airbus A320 oo ku burburtay Karachi.
Hay’adaha caafimaadka ee ku sugan gobolka Sindh waxay sheegeen iney shilkaasi diyaaradeed ku dhinteen 97 qof.
Hase yeeshee, weli lama sheegin waxa sababay shilkaasi.
Balse mas’uuliyiin ka tirsan hay’adda duulimaadyada Pakistan waxay wakaaladda wararka ee Reuters u shegeen iney dhici karto iney diyaaradda cillad dhinaca degitaanka ah ay la kulantay.
Sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya iney labada matoor ee diyaaraddaba ay dab qabsadeen, caga dhigashadan uu dhib ku noqday.
Shilkaasi ayaa ku soo beegmay maalin un kaddib marki ay Pakistan dib u fasaxday diyaaradaha ganacsiga xilli uu dalka Pakistan billaabay inuu xayiraadaha khafiifiyo.
Maxammed Zubeyr siduu shilka uga badbaaday?
Diyaaradda burburtay uu nooceedu yahay Airbus A320 tirsiga duuliimaadkeeduna ahaa PK8303 waxay sidday 91 rakaab ah iyo 8 ka mid ah shaqaaalaha diyaaradda oo ay ka mid ahaayeen qoyska Maxamed oo Karachi ugu socday si ay ugu soo ciidaan.
Qayaasti saacaddu markay ahayd 14:30 xilliga Pakistan ayey diyaaraddu damacday iney soo caga dhigato gigada diyaaradaha caalamiga ah ee Jinnah, waa xilligaa marka ay diyaaraddu burburtay.
Mr Zubeyr oo shilkaasi dhaawac fudud uu ka soo gaaray wuxuu sheegay diyaaraddu iney damamacsaneyd iney garooonka caga dhigato balse 10-15 daqiiqo gudahood ay ku burburtay.
“Cidna kuma fakarin iney diyaaraddu burbureyso; diyaaradduna xawaara aad u hooseeya ayay ku socotay maadaamaa ay soo caga dhiganeysay” ayuu yiri.
Wuxuu sheegay inuu shilka kaddib uu miir daboolmay, wuxuuna yiri: “Waxaan dhinac walba ka maqlayey qaylo, qaylada carruur iyo dad waaweynba. Waxaan arkay dab diyaaradda qabsaday. Dadkina waan arki waayey waxaanna maqlayey qayla oo keli ah”.
“Waxaan iska furay suunka, waxaanna arkay iftiin yar, waxaanna u dhaqaaqay dhinaca aan iftiinka ka arkay. Waxaanna damcay inaan diyaaradda oo dhulka u jirtay 3 mitir aan ka boodo si aan lafaheyga u badbaadiyo,” ayuu yiri.
Maxaa sababay shilka?
Diyaaradda waxay burburtay caga dhigasho mar ay waxyar un uga harsan tahay, xilli ay dul mareysay xaafad deegaan ah oo garoonka Karachi duleedkiisa ku yaallay.
Muuqal telefishiinka laga baahiyey ayaa muujianaya diyaaradda oo ku dhacday meel ay dadku ku badan yihiin iyo shaqaalaha gurmadka oo goobta shilku ka dhacay howlgal ka wado iyo gawaari ay dab qabsadeen.
Maxamed Cuzeyr oo shilkaasi goob joog u ahaa oo BBC u warramay ayaa sheegay inuu maqlay qarax aad u weyn kaddibna gurigiisa uu dibadda uga soo baxay. “Waxaana shilkaasi gabi ahaanba ku burburay afar guri oo ay diyaaradda ku soo dul dhcday, waxaana is qabsaday qaac iyo holac shilka ka dhashay,” ayuu yiri.
“Guriyaha shilka ku burburayna deris ayaanu ahayn oo igama fogeyn, marka idiinma sheegi sida ay dhacadadaasi oo naxdin badneyd.”
Codadki ugu dambeeyey oo ay isdhaafsanayeen duuliyaha diyaaradda iyo shaqaalaha haga duullimaadyada oo garoonka ku sugnaa oo lagu baahiyey warbaahinta Pakistan ayaa sheegay inuu Duuliyaha diyaaradda burburtay uu sheegay iney labada matoor ee diyaaraddaba ay istaageen.
Baarayaasha ku howlan baaritaanka shilka ayaa dadaal ugu jira sidi ay u heli lahaayeen sanduuqa madoow ee codka duuba si ay u ogaadaan waxa shilaasi sababay. Waxaana shilkaasi loo dhisay guddii u gaar ah oo baaro shilkaasi diyaaradeed ee ay dadka badan ku dhinteen waxa keenay.
Shirkadda diyaaradaha ee PIA oo iska leh diyaaradda burburtay waxay sheegtay diyaaradda iney dullimaadka billaawday 2014-kii.
Sida ay sheegayaan wararka ka soo baxay laamaha dowliga ee dalka Pakistan waxaa la xaqiijiyey iney shilkaasi ku dhinteen 92, waxaanse weli caddeyn inta qof oo diyaaradda saarneyd iyo dadka dhulka joogay ee shilka ku dhintay.
Ra’isal wasaaraha Pakistan wuxuu sheegay “shilka inuu ahaa mid naxdin iyo aragagax leh”, isaga oo amar ku bixiyeey in baaritan degdeg ah la sameeyo.
Feeryahan caan ah oo ballanqaaday kharashka duugta ninkii madoobaa ee ay booliska Minneapolis dileen
VIDEO: Muuqaalka 2-jir hooyadii oo meyd ah toosinaya oo qabsaday baraha bulshada
VIDEO: Muuqaal cusub oo ku saabsan sida ay boolisku ula dhaqmeen ninkii madowga ahaa ee dhintay oo lasii daayay
VIDEO: Yaabka yaabkiis! Cuuryaan gacmaha la`oo bastoolad uu lugaha u adeegsaday ku dhacay dukaan